Get ukwazi isixeko - IVIDIYO INCOKO zwelonke! Onke amazwe, iinqwelo, lonke ihlabathi.
Kwi-Germany: kubekho inkqubela meets NGU-tormentors kwaye wasabela emva kwi-e-iraq - exclusive - Sputnik Germany
Ulwazi olungakumbi, khangela zethu umgaqo-nkqubo wabucala
Kodwa ke yena kuhlangatyezwana nazo apha KUKUBA umntu, ukuba ngaye yena bebe zithengiswe kwi streetAmapolisa ayikwazi ukwenza malunga asylum seekers, nto. I kubekho inkqubela asaba ukoyika emva e-iraq. Kodwa kwanokuba kuya, yena ngu sengozini. Ngoku Aschach ufuna nosapho lwakho ukuya e-Australia ukuba emigrate. Ngabo wambulala, imprisoned, enslaved, sexually uyahlukunyezwa kwaye zithengiswe. I-elimfiliba ka-Yazidis kwi amazwe apho terrorist militia Islamic imo (YI) ukuhamba ngokukhululekileyo, embi kangako. Iingxelo kwi NGU-ekuthinjweni Yazidi girls nabafazi baba wakhokela kwi-Germany ngonyaka, ekugqibeleni, inclusion ka-okhethekileyo quota yabasetyhini. I-kamsinya kuba ubudala Aschach H. sesinye ezi girls. Waze weza Germany, bakholwa kuye ukuba abe bekhuselekile, kwaye wenza amava ukuba counts kuba traumatized victims of the eyona imbi: yena zahlangana nge-Abu H, kwi offender, kwi zabo tormentors, ukuma ngokwamazwi enu, ngoku, njengoko i-asylum seeker kwi-Germany.
Gander Sputnik-inqaku: Berlin-esekelwe Ex-Commissioner for foreigners: Germans kufuneka iqaphele, njengokuba minority, baya ukoyika ukuba umntu ukhe ubene spying njalo.
Ngaba anayithathela lunxulumano ubuso bakhe ngokucacileyo, kodwa wathi ukuba kwakungenakwenzeka ukuba ayikho kwenzeka Germany. Mna ke waxelela umama wam ukuba ndibone indoda eyaye ikhangeleka ngathi i-NGU-umntu. Wam Umama wathi: awunokwazi kuba besoyika, nguye. Kwi-Germany akukho, ngoko ke Jesidin. REUTERS Jon Nazca Vienna:"ngokwesiqu migration ngu elikhulu threat". Ngofebruwari, yena waqalisa i-internship kwi hairdressing salon. Olandelayo day ngomhla shock: umntu emva kodwa kweli xesha, kokukhona esebenzayo: weza phezulu kum yaza yathi: Babe mna cela into, ngokunxulumene young umfazi. Ndaza ndathi: Nceda. Kwaye mna sele wayesazi ukuba ukho umntu. Wathi: nisolko Aschach. Ndathi: hayi, andikho Aschach lowo ufaka. Wathi: Kodwa, nisolko Aschach kwaye ndim Abu H. yena ezifanelekileyo siganeko, kuye loluntu lwabasebenzi basefama kwaye ke emva koko kwi-oyintloko we-Waiblinger amapolisa.
Banikela kum inani wathi: Ukuba usebenzisa le ndoda, kanye kwakhona, khangela, kufuneka umnxeba kwethu.
Yena wabona kuye, sawule, sawule, amapolisa wadala umfanekiso offender. Ke mna ndalinda inyanga kunye necala. Abanalo kwenzeka into engalunganga, ubalisa i kubekho inkqubela. Utitshala, abo yena waba waguqukela kwakhona, kuba wathi: Ukuba e-iraq kungcono kuba wena kukuthi, ngoko ke kufuneka ukuba musa hamba, ke wena hlala, kwaye siza jonga wena. I kubekho inkqubela sangena e-iraq. Ukongeza le Meko kwi-Germany, ukuba sine wakhe dade wathi kutsha nje sele yakhulula ukusuka ekuthinjweni, kwaye wandibulela ukuba kubavelela ngomsindo e-iraq. Ezentlalo-ntle lwabasebenzi basefama wathi ukuba Aschach wavunyelwa ukuba uhlale kuba phezulu ukuya kwiinyanga ezintandathu kwi-e-iraq. Noko ke kuya kufuneka ukuba kubuyela, kungenjalo wouldn ukuba umsebenzi. Kodwa kubuyela Sasejamani waba kuba Aschach, ngokukhawuleza kakhulu ayisasebenzi i-mba. Gander Sputnik-inqaku: uya zange kuba loyalty kwi-Germany: Facebook iibhloko Islam critic Xa andiyenzanga kuthi ukuba ndinixelele wam nabantakwethu kwaye ubawo, ubawo, ukuba yena ufuna kum umva Germany, apho lo mntu, ngoko ke ngu young umfazi abo sele kuba phantse ezine iinyanga e-iraq kwaye basenokuba umva ngo-oktobha kwi-Germany. kubalulekile kuba wena: nawuphi na kunjalo, akunyanzelekanga ukuba yiya simemo kwakhona, akukho mcimbi kwenzeka ntoni ngoku. Kubalulekile kananjalo ukuba usamuel i-kubalulekile ukuba ufuna nokuba esi siganeko, ungathanda ukubulela zonke fellows abo benze kakhulu kuba wena ufuna zenziwa.
AP photo Manu Islamists kwi-lwezibhedlele kwi-EU kwaye Senegal, Kodwa zabo hlala kwi-e-iraq ayiyi kuba Jesidin kanjalo harmless.
Ngenxa nkqu nokuba weza abayo usapho, abahlala e-iraq kanjalo omkhulu yinxalenye yosapho ye-NGU-umntu, Baghdad, njengoko kubekho inkqubela waxelela.
Babecinga kwi-Germany bekhuselekile
Kwaye njengoko kuba yakho enkulu usapho, ngoko ke ingaba ngoku exempt, ngelixa amalungu okanye sele ezithengiweyo, kodwa zona? esekuthinjweni kwaye siya kuba akukho uqhagamshelane kwaphela, i-girls.
Ndithe ke kakhulu ukoyika. Sidinga ukuba ushiye e-iraq, kodwa hayi kwi-Germany. Endaweni yoko, nikhangele ukuba e-Australia.
U-Br kwaye omnye udade Aschachs sele abahlala apho.
Uninzi njenge ubuya kunye lonke usapho apho. Kunjalo ngoku onikwe kwi-Federal Prosecutor kwi-Karlsruhe, ngoko ke, ukuza kuthi ga ngoku, kunye sobering isiphumo: ngoko ke, ukuza kuthi ga ngoku, sinalo na zilawulwe ukuchonga perpetrator kunye kuyimfuneko zokhuseleko, umhombandlela ucinezele spokeswoman kuba Federal Prosecutor ngu-ofisi ngokuchasene Sputnik. Le meko yaba azikathi esikolweni. Ngaphezulu kwi ityala le-Yazidi kubekho inkqubela kwi-Aschach kwaye yakho NGU-tormentor ngomhla wama, Sputnik Iindaba, sizimisele ukuba umyalelo wokhuselo yakho personal data.
Sino igqityiwe zethu ingxelo yabucala ngoko ke, ukuba nina, Jikelele i-data umyalelo wokhuselo umqathango wama - (DSGVO), entsha EU regulation, njalo.
Nceda familiarize ngokwakho kunye zethu ingxelo yabucala. Iqulathe Iinkcukacha malunga iintlobo ulwazi thina ukuqokelela, njani thina ukuyisebenzisa, kwaye malunga amalungelo akho malunga data umyalelo wokhuselo.
Ukususela kufuneka sele wathi kuthi yakho personal data, njengoko kufuneka yenziwe yakho personal-Akhawunti yakho, nceda jonga ibhokisi engezantsi ukusebenzisa oku: Ukuba ufuna musa ufuna thina I data yakho nkqubo, nceda cofa apha ukucima i-Akhawunti yakho.
Ukuba unayo nayiphi na imibuzo okanye yethutyana malunga zethu umgaqo-nkqubo wabucala, nceda uqhagamshelane nathi.
Sizimisele ukuba umyalelo wokhuselo yakho personal data. Sino igqityiwe zethu ingxelo yabucala ngoko ke, ukuba nina, Jikelele i-data umyalelo wokhuselo umyalelo omtsha EU regulation, njalo. Nceda familiarize ngokwakho kunye zethu ingxelo yabucala. Iqulathe Iinkcukacha malunga iintlobo ulwazi thina ukuqokelela, njani thina ukuyisebenzisa, kwaye malunga amalungelo akho malunga data umyalelo wokhuselo. Ukususela kufuneka sele wathi kuthi yakho personal data, njengoko kufuneka yenziwe yakho personal-Akhawunti yakho, nceda jonga ibhokisi engezantsi ukusebenzisa oku ngaphezulu: Ukuba awufuni kuthi ukuba kubekho inkqubo i data yakho, nceda cofa apha ukucima i-Akhawunti yakho. Ukuba unayo nayiphi na imibuzo okanye yethutyana malunga zethu Ingxelo yabucala, qhagamshelana. Kunye ubhaliso kwaye yogunyaziso Lomsebenzisi kwi-Sputnik-websites ngumsebenzisi-akhawunti okanye umsebenzisi-akhawunti kwi-loluntu networks, imvume kunye migaqo. Umsebenzisi undertakes hayi ekuvunyelwene ngawo esebenzayo umthetho we-isirashiya kwaye\_okanye ngamazwe umthetho kwaye umthetho ka-langaphandle States kunye yakhe iintshukumo.
Ulawulo linelungelo ukucima izimvo kwezinye iilwimi, kunye nani likhulu yinxalenye isiqulatho kwathiwa. Kuyo yonke ulwimi iinguqulelo iwebhusayithi Sputnik Iindaba kusenokuba edited Ngumsebenzisi ekhohlo izimvo. Ulawulo banelungelo lokufumana walile, ngaphandle phambi kokuba isaziso Abasebenzisi, ufikelelo icala okanye kwi - Ityala le-ukwaphulwa komthetho izimvo imithetho kuba Umsebenzisi, okanye phezu ukufunyaniswa ka-imiqondiso enjalo breach Lomsebenzisi ukucima yakhe umsebenzisi-akhawunti.
Dating nge-girls ngaphandle ubhaliso
Ukukhangela okuphambili zabucala kunye iifoto kwaye BIOS ka-boys kwaye abantu, girls nabafazi kuba likhulu kwaye easiest-intanethi Dating, budlelwane nabanye, unxibelelwano, iintlanganiso, uthando kwaye friendship
Ziya kukunceda hayi nokubhalisa, ngokukhawuleza kakhulu negqityiweyo"get ukwazi isixeko Lima,"kunye beautiful girls abafazi okanye handsome guys abantu.
Ukukhangela okuphambili ifumanise ulinganisa abasebenzisi ukuba evela yakho isixeko, ukususela Moscow, enew York, Atene, Berlin, Tokyo, i-samara, i-cairo, sasekapa, i-tehran, i-shanghai, Bangalore kwaye nezinye ezininzi izixeko kwi-France. Apho kuhlangana kwi-i-samara kuba ezinzima budlelwane okanye lungs. Apha. Ikhangela ukukhanya okanye ezinzima Dating kwi-Lima. Emva zonke, ngomhla wethu ezinzima kwaye ngexesha elinye lula Dating site ngoko ke, abaninzi beautiful girls nabafazi, boys kwaye namadoda neli isixeko kunye nezinye ezininzi izixeko France, Egermany nakwamanye amazwe. Abaninzi abasebenzisi mzuzu basemazweni isimo"kwi-intanethi"kwaye ingaba ukhangela kuba yindlela elula kwaye complex"Dating kwi-i-samara".
Thina banekratshi lomthetho i-samara yi stunning isixeko
Ngenxa yokuba ndifuna ukuqala ezinzima elide ezinzima budlelwane ukuba kukhokelela umtshato kwaye usapho, okanye ngokulula kuba glplanet pastime.Ukungenela free onesiphumo Dating kwaye wena. Kuphela sisebenzisa ulinde wena real abantu kwi-Russia, abaye kanjalo ukuphila ngendlela yakho isixeko kwaye ufuna ukuya kuhlangana nani. Kwesi sixeko kukho abaninzi beautiful abantu abakufutshane sele ebhalisiweyo bethu inkonzo kwaye zilungile ulinde wena ukuqala omtsha acquaintance kwaye unxibelelwano, ukukhangela ngokwakho. Fumana i-real i-samara Dating ukuba babe end kwi-ezinzima (kunzima) okanye kulula (esilula) ubudlelane, unxibelelwano, friendship, flirt, iintlanganiso, uthando, umtshato kwaye usapho nendalo.Ezilungileyo comment kwi-Dating, ilanlekile ka-fun kwaye yinyaniso uthando.
Wamkelekile site"Dating kwi Us"
Yehlabathi ka-unxibelelwano kunye nothando ulindele kuba wenaSifuna wonke umntu kweli hlabathi ayikwazanga ukufumana yakho soulmate,"Dating kwi Us"ikunceda ukudibanisa abantu ababini kwaye ngokuphonononga kwabo ukufumana ngamnye ezinye kule omkhulu ehlabathini. Sisebenzisa uqinisekile ukuba sinako ukunceda wena ukufumana uthando lwakho okanye abahlobo kwi-eli lizwe iintlanganiso.
Bhalisa kuba free kwi-eyona ndawo"Dating kwi Us"
Bhalisa kuba free kwi Dating site"Dating kwi Us", ngenxa kwenye indawo ulindele kuwe uthando lwakho, trust nathi kwaye siya kukunceda ukufumana ngamnye enye kwi-site"Dating kwi Us". "Dating kwi Us"- intanethi Dating ezinzima budlelwane. Yethu"Dating kwi Us"- intanethi Dating kwaye ezinzima budlelwane inika ithuba ukufumana umntu ngamnye umphefumlo mate.Ngokulula bhalisa simahla kwaye uya kwazi ukuba zithungelana kulo ilizwe iintlanganiso i-intanethi Dating ezinzima budlelwane ngaphandle na evuzayo, asikholwa kwentlawulo sokubhalisa kunye kuba papasha inkangeleko, uyakwazi imboniselo nezinye profiles ngaphandle nokubhalisa kwi"Dating kwi Us"- intanethi Dating ezinzima budlelwane, kodwa ngokupheleleyo imboniselo yonke imifanekiso kwaye ukufunda ezinzulu abantu kufuneka free ubhaliso kwi"Dating kwi Us"- intanethi Dating ezinzima budlelwane. "Dating kwi Us"Dating site Njani umdla ukuba zithungelana kunye abantu abatsha kwi"Dating kwi Us"omdala Dating, ngoko ke komhlaba ukuba incoko kunye abantu abatsha yonke imihla. Sino izigidi profiles Dating abantu abo ufuna unxibelelwano okanye iintlanganiso kunye"Dating kwi Us"Dating site.
Bonke abantu ufuna efanayo, ezinzima budlelwane, kodwa ukuba ufuna romance okanye flirtation phakathi zethu questionnaires"Dating kwi Us"Dating site unako rhoqo ukufumana enjalo.
Sebenzisa zethu intelligent ukhetho a pair of kuba ekhawulezayo befuna Dating"Dating kwi Us"Dating site.Ukungena"Fumana Us"iwebhusayithi Dating kwaye ezinzima budlelwane. Kwiwebhusayithi"Dating kwi Us" Kubalulekile umdla ukubona indlela ngamanye amaxesha elula eyobuhlobo budlelwane kwi inyaniso uthando, ayiyi kuphela, kubalulekile ukufumana umntu lowo uza kuba aph, kodwa kubalulekile ukuba babelane yakho umdla kwaye imisetyenzana yokuzonwabisa. Nkqu uluvo humor kakhulu kuchaphazela umgangatho budlelwane ukuba uza kuba phakathi kwenu, ngoko ke kubalulekile ukuba ngokuchanekileyo kwaye honestly uzalise i-Dating inkangeleko kwi-site"Dating kwi Us", ngoko ke sinako ukufumana nani lesibini isiqingatha. Kwaye ungakwazi ukwakha budlelwane nabanye kwi-site"Dating kwi Us".
Kwi-China, kukho igama omnye abantu
Sheng-nian, oko kuthetha ukuba abantu kuba noko ukufumana umfazi kwaye yiya lizwe lethu kunye nokulima ngokwesini isithuba, ngu big ingxakiKwi-China, kukho izigidi ngakumbi abantu kunokuba abafazi, kwaye oku hangover sele koyisa kweli lizwe ke omnye-umntwana mgaqo-nkqubo, esibizwa abolished nkqu nokuba yayo iziphumo kuba ukwanda kwi-embalwa edlulileyo decades. I-ngokwesini imbalance ngu enjalo ukuba abantu abaninzi ukufumana kube nzima ukufumana iqabane lakho, kwaye isithuba, kuya noko kwanda. Ngokweentswelo zabo uqikelelo, akuyi kuba izigidi ngakumbi abantu funa a iqabane lakho ngaphezu abafazi. Kule yakhe incwadi"i-Demographic elizayo ka-i-american ezopolitiko kuqoqosho,"Nicholas Memmingen cites neengqikelelo ukuba zixhaswa yi-ngaphezu a zekota Isitshayina abantu abo akazange tshata. Ngoku, xa kukho kude abangaphantsi abafazi kunokuba abantu, kugqatso ukufumana ilungelo iqabane lakho uze uphumelele ibhaso phezu umntu phambi kokuba nabani na ongomnye lwenze abanye abantu nzima ukufumana umfazi. Baya ukuchitha enkulu sums imali kwi-creative, ngamanye amaxesha ezingamashumi, amanyathelo ukuphumelela umfazi. Enye yeentombi Isitshayina businessmen sued isiboniso-Arhente ebekwe kwi-i-shanghai kuba na ingxowa-kuye umfazi, ukubhatala i company izigidi yuan (USD, m) kuba ukwenza umsebenzi i-kofakwano phendla. Kwelinye ityala, ikhompyutha umdwelisi ukusuka e-afrika isixeko Guangzhou wathenga i-iPhone njengenxalenye yenkqubo thoughtful umtshato proposal ukusuka girlfriend yakhe. Ngelishwa, lowo irhoxisiwe, kunye yakhe humiliation zonke phezu ndawo kwaba ngxi kokuya kwi, njengoko iifoto sehlo baba ekubeni usharedi ngokusebenzisa intlalo-media. Inxalenye ingxaki kukuba ubudala kwaye iindlela ezintsha intlanganiso abantu musa ukusoloko umsebenzi. Isitshayina Entsha unyaka sele ixesha elide ukuba indlela kuba abantu ukufumana ukwazi zabo iqabane lakho.
Abantu abaninzi tyelela amakhaya ka-abahlobo nosapho ngexesha festival, apho isebenzisa ukususela emva kwexesha kweyomqungu ukuya mid-februwari, ngoko ke singlons kuba abaninzi amathuba ukuhlangabezana enokwenzeka partners.
Kodwa ubudala tradition intlanganiso enokwenzeka partners sele inikwa indlela bale mihla okkt.
Kwi-China, njengoko kwamanye amazwe, inani i-intanethi Dating likhule rapidly, kwaye izithuba ezifana"Indlu Tencent"ingaba wokuba kujike ethandwa kakhulu iindlela ukuhlangabezana abantu.
Dating kwi-China kwiminyaka yakutsha nje sele kuba ngaphezulu vula kwaye abantu abaqhelekileyo kunye amathuba Western amazwe, uthi Omnci Li. Younger izizukulwana kuba ngaphezulu nemigaqo yokusebenzisa imichiza, kwaye landela intliziyo yakho njengoko abazali. Iimpendulo ezininzi iifomu ka-unxibelelwano, ihamba kunye uninzi abafazi, ubhideke indlela abantu kuhlangana, kwaye kwi-China - ngaphakathi enkundleni. Omnci Li evela Suzhou, kwiphondo ka-Jiangsu kwi-Central Mpuma coast of China, yedwa kwaye kobakhe lizwe. Yena sele uqaphele a lokukhula inani abantu abakhoyo kwi-icacile icandelo lomboniso, organizing njengesiqhelo kwaye ukudala uluntu entertainment kuba iintlanganiso. Abanye abantu baguqukele psychologists kwaye stylists babe ngakumbi nabafana. Kwaye ukuphepha intriguing imibuzo evela nosy dads, abanye nkqu resort ukuba hiring iibhonasi girlfriends ukunceda zabo dads kunye izicelo ezifana"Hire mna - Legg."Iingxelo zibonisa ukuba hiring a kubekho inkqubela unako iindleko RMB (dollazi) ngosuku. Abantu ke iingxaki kwi-ingxowa-a ingaba iqabane lakho ngakumbi acute kwi-poorer ezisemaphandleni, edityaniswe ngu elide-emi tradition ukuba abantu kufuneka bakwazi kunikela a decent inqanaba mali ukhuseleko phambi kokuba unako ngokukhuselekileyo itshata umfazi. Hong Yang, ngubani ngoku watshata kwaye kobakhe usapho, lichaza oku njenge-China ke umama-zala ke kuqoqosho. Xa abantu ufuna ukufumana watshata, elizayo umama-kwi-mthetho ugxininisa ukuba yena kuqala sithenge indlu, kwaye kwangoko thatha inyathelo elilandelayo. Esi sesinye izizathu kutheni indlu amaxabiso zithe ngoko ke phezulu kwiminyaka yakutsha nje, yena utshilo. Kodwa le mali mthwalo kuba abantu kanjalo enza kube nzima kuba baninzi abafazi ukufumana iqabane lakho.
Yena idibanisa ukuba ingxaki kunye inani elikhulu lamadoda, enaphatha kanjalo ngenxa yemali iindleko, umtshato, lugqiba ukuba get watshata emva koko.
Kwaye xa abe efumana ube sowuzinzile, uya rhoqo ikhangeleka kuba umbutho woomama. Umahluko kwi age ezimbini okanye ngaphezulu kweminyaka kuxhaphakile kwi-Isitshayina marriages.
Kunjalo, i-opposite kanjalo zinokuba inyaniso
Kunzima kuba abafazi ukufumana ezilungele abantu xa sukuba get ubudala, uthi Hong Yang. Abaninzi decent Isitshayina abantu ufuna enye younger kwaye ngaphezulu beautiful girls.
Abafazi, ngokulandelelanayo, funani kwezezimali, apho tends ukuba ukuthandwa yobudala engama-abantu, ingcaphephe kuthi.
Kulungile-educated kwaye financially elizimeleyo abafazi abo bahlala unmarried ingaba ekubhekiswe kuye njengoko omnye abafazi. unwanted girls, uthi Heather MA, lowo utshate yayo ubomi i-shanghai. Abazali ziindleko ezinkulu imvelaphi koxinzelelo ukufumana iqabane lakho ngoko nangoko. Kwaye zisoloko phaya, uthi Roger Zhou, ngubani ngoku watshata kwaye ubomi kwi-Suzhou. Abazali bacinga ukuba unoxanduva lokwenza wabo omdala unyana usapho, athi. Ngaba tyhala umntwana ukufumana iqabane lakho, kuphuma kwi street kwaye bayathetha a umtshato.
Intlanganiso umbutho yi-abazali ingu kakhulu ethandwa kakhulu, uthi Melinda Hu, ngubani omnye.
Abazali abathi ubuso ezininzi ukuzonwabisa criticism ukuba intombi yabo okanye unyana akuthethi ukuba get watshata, ngoko ke kuqheleke ukuba kubekho inkqubela ke, abazali bazimisele vumelani zabo intombi yiya kwi eyimfama umhla kwaye get watshata phambi kokuba ufumane watshata.
Kwaye ke kukho i-vula-zezulu wedding kwamanye amazwe.
Kunyaka omnye oyena corners lizwe kwi-i-shanghai, abazali yokuposa handwritten ads kuba zabo kuphela abantwana kunye iinkcukacha ezifana ingeniso, imfundo, kwaye personality ingaba ekubeni inundated.
Abanye abazali siyazi okokuba baye zithe makhaya yentengiso rhoqo ngeveki kuba iminyaka ngaphandle impumelelo. Utshintsho ngendlela abantu kuhlangana kunye njani abantu inkundla zabo partners, ingakumbi kunye ngakumbi ugxininiso lwalo kwi-uthando kwe kwi isebenziseke imiba efana-mali yokhuseleko. Zhong Li, umzekelo, uthi ukuba ukho akukho hurry ukufumana watshata, preferring ukuba ulinde umntu abafanelekileyo wakhe entliziyweni kwaye umphefumlo. Izimvo ngalo ibali okanye nantoni na enye into kuwe anayithathela ebone kwi-BBC Imali, nceda uvule yakho intloko ngomhla wethu Facebook iphepha okanye ngeposi kwi-Itwitter. Kwi-China, kukho igama omnye abantu. Sheng-nian, oko kuthetha ukuba abantu kwakhona uye ujonge kuba umfazi kwaye ngenisa lizwe kunye nokulima ngokwesini isithuba, ngu big ingxaki. Kwi-China, kukho izigidi ngakumbi abantu kunokuba abafazi, kwaye oku hangover sele ekhokelwa kweli lizwe ke omnye-umntwana nkqubo ekubeni scrapped, nangona iziphumo elidlulileyo ezimbalwa decades zithe ngaphezulu kakhulu. I-ngokwesini imbalance ngu enjalo ukuba abantu abaninzi ukufumana kube nzima ukufumana iqabane lakho, kwaye i-isithuba kukuba sifuna widen. Ngokweentswelo zabo uqikelelo, akuyi kuba izigidi ngakumbi abantu funa a iqabane lakho ngaphezu abafazi. Kule yakhe incwadi"i-Demographic elizayo ka-i-american ezopolitiko kuqoqosho,"Nicholas Memmingen cites neengqikelelo ukuba zixhaswa yi-ngaphezu a zekota Isitshayina abantu abo akazange tshata. Ngoku, xa kukho kude abangaphantsi abafazi kunokuba abantu, kugqatso ukufumana ilungelo iqabane lakho uze uphumelele ibhaso phezu umntu phambi kokuba nabani na ongomnye lwenze abanye abantu nzima ukufumana umfazi. Baya ukuchitha enkulu sums imali kwi-creative, ngamanye amaxesha ezingamashumi, amanyathelo ukuphumelela umfazi. Enye yeentombi Isitshayina businessmen sued a i-shanghai ntetho-Arhente kuba na ingxowa-kuye umfazi emva ukubhatala i company izigidi yuan (USD, m) kuba ukwenza umsebenzi i-kofakwano phendla. Kwelinye ityala, ikhompyutha umdwelisi ukusuka e-afrika isixeko Guangzhou wathenga i-iPhone njengenxalenye yenkqubo thoughtful umtshato proposal girlfriend yakhe. Ngelishwa, yachaswa, kodwa akubanga olwamkelekileyo. i-humiliation wawusaqhubeka njengoko iifoto sehlo baba usharedi ngokusebenzisa intlalo-media. Inxalenye ingxaki kukuba ubudala kwaye iindlela ezintsha intlanganiso abantu musa ukusoloko umsebenzi. Isitshayina Entsha unyaka sele ixesha elide ukuba ithuba kuba abantu ukukhawulelana neemfuno zabo iqabane lakho. Abantu abaninzi tyelela amakhaya ka-abahlobo nosapho ngexesha festival, apho isebenzisa ukususela emva kwexesha kweyomqungu ukuya mid-februwari, ngoko ke singlons kuba abaninzi amathuba ukuhlangabezana enokwenzeka partners. Kodwa ubudala tradition intlanganiso enokwenzeka partners sele inikwa indlela bale mihla okkt. Kwi-China, njengoko kwamanye amazwe, inani i-intanethi Dating likhule rapidly, kwaye izithuba ezifana"Indlu Tencent"ingaba wokuba kujike ethandwa kakhulu iindlela ukuhlangabezana abantu. Dating kwi-China kwiminyaka yakutsha nje sele kuba ngaphezulu vula kwaye abantu abaqhelekileyo kunye amathuba Western amazwe, uthi Omnci Li. I-younger kwisizukulwana sele ngakumbi nemigaqo yokusebenzisa imichiza, kwaye landela intliziyo yakho ngathi abazali bakho. Iimpendulo ezininzi iifomu ka-unxibelelwano, ihamba kunye uninzi abafazi ingaba ubhideke endleleni abantu kuhlangana, kwaye kwi-China-ngaphakathi enkundleni. Omnci Li evela Suzhou, kwiphondo ka-Jiangsu kwi-Central Mpuma coast of China, yedwa kwaye kobakhe lizwe. Yena uqaphele a lokukhula inani abantu kwi-icacile icandelo lomboniso organizing njengesiqhelo kwaye ukudala uluntu entertainment kuba iintlanganiso. Abanye abantu baguqukele psychologists kwaye stylists babe ngakumbi nabafana. Kwaye ukuphepha intriguing imibuzo evela prying abazali, abanye nkqu resort ukuba hiring iibhonasi girlfriends ukunceda abazali babo kunye iinkqubo ezifana"Hire mna - Lagig". Ngokunxulumene iingxelo, hiring a kubekho inkqubela unako iindleko RMB (dollazi) ngosuku. Abantu ke iingxaki kwi-ingxowa-a ingaba iqabane lakho ngakumbi acute kwi-poorer ezisemaphandleni, edityaniswe ngu elide-emi tradition ukuba abantu kufuneka bakwazi kunikela a decent inqanaba mali ukhuseleko phambi kokuba unako ngokukhuselekileyo itshata umfazi. Hong Yang, ngubani ngoku watshata kwaye kobakhe usapho, lichaza oko njengoko China ke umama-zala kuqoqosho. Xa abantu ufuna ukufumana watshata, elizayo umama-kwi-mthetho ugxininisa ukuba yena kuqala sithenge indlu, kwaye kwangoko thatha inyathelo elilandelayo. Esi sesinye izizathu kutheni indlu amaxabiso zithe ngoko ke phezulu kwiminyaka yakutsha nje, yena utshilo.
Kodwa le mali mthwalo kuba abantu kanjalo enza kube nzima kuba baninzi abafazi ukufumana iqabane lakho.
Yena idibanisa ukuba ingxaki kunye inani elikhulu lamadoda, enaphatha kanjalo ngenxa yemali iindleko, umtshato, lugqiba ukuba get watshata emva koko. Kwaye xa abe efumana ube sowuzinzile, uya rhoqo ikhangeleka kuba umbutho woomama. Kunzima kuba abafazi ukufumana ezilungele xa abantu baya khona i-ubudala, uthi Hong Yang. Abaninzi decent Isitshayina abantu ufuna enye younger kwaye ngaphezulu beautiful girls. Abafazi, ngenxa yabo isiqingatha, ingaba ikhangela kwezezimali, apho tends ukuba ukuthandwa yobudala engama-abantu, ingcaphephe kuthi. Kunjalo, i-opposite kanjalo zinokuba inyaniso. Kulungile-educated kwaye financially elizimeleyo abafazi abo bahlala unmarried zibizwa ngokuba undesirable girls, uthi Heather MA, abo kule yakhe incwadi watshata kwi-i-shanghai. Abazali ziindleko ezinkulu imvelaphi koxinzelelo ukufumana iqabane lakho ngoko nangoko.
Kwaye zisoloko phaya, uthi Roger Zhou, ngubani ngoku watshata kwaye ubomi kwi-Suzhou.
Abazali bacinga ukuba unoxanduva lokwenza wabo omdala unyana usapho, athi. Intlanganiso umbutho yi-abazali ingu kakhulu ethandwa kakhulu, uthi Melinda Hu, ngubani omnye. Abazali abathi ubuso ezininzi ukuzonwabisa criticism ukuba intombi yabo okanye unyana akuthethi ukuba get watshata, ngoko ke kuqheleke ukuba kubekho inkqubela ke, abazali bazimisele vumelani zabo intombi yiya kwi eyimfama umhla kwaye get watshata phambi kokuba ufumane watshata. Bona umfanekiso abazali exploring ukhuphiswano kwi eludongeni a umtshato kwimakethi kwi-i-shanghai (Credit: Almai) Ngoko kukho i-vula-zezulu umtshato kwamanye amazwe. Kunyaka omnye oyena corners lizwe kwi-i-shanghai, abazali yokuposa handwritten ads kuba zabo kuphela abantwana kunye iinkcukacha ezifana ingeniso, imfundo, kwaye personality ingaba ekubeni inundated.
Abanye abazali eyaziwayo ndwendwela yentengiso rhoqo ngeveki kwi - iminyaka emininzi ngaphandle impumelelo.
Utshintsho ngendlela abantu kuhlangana kunye njani abantu inkundla zabo partners, ingakumbi kunye ngakumbi ugxininiso lwalo kwi-uthando kwe kwi isebenziseke imiba efana-mali yokhuseleko.
Umzekelo, Zhong Li, abo athi ukuba ukho akukho hurry ukufumana watshata, prefers ukuba ulinde umntu olilungu kukunceda kakhulu intliziyo yakhe kwaye umphefumlo.
Izimvo ngalo ibali okanye nantoni na enye into kuwe anayithathela ebone kwi-BBC Imali, nceda uvule yakho intloko ngomhla wethu Facebook iphepha okanye ngeposi kwi-Itwitter.
Kwi-Firefox Aph, kukho akukho imihla, akukho ubhaliso, akukho ifowuni
Etchikochi okwangoku a free, akukho-ubhaliso"ileta"site kwi-Firefox AphOku inombolo yefowuni site inikeza indlela entsha Dating, imibulelo ubutyebi bendalo kangangoko kunokwenzeka ubeko kwaye uhlalutyo lwezibonelelo. Polovinka Dating site kwaye ubhaliso kuba free, ngaphandle iifoto, ifowuni amanani kwaye isihloko impahla ukhuseleko awunakuba kuhlangana.
Polovinka Dating site kwaye iifoto, ifowuni amanani nokhuseleko iimpahla awunakuba kuhlangana, ubhaliso ifumaneka simahla.
Polovnki iwebhusayithi ifumaneka simahla registration kwaye zonke iinkonzo ziyafumaneka kwi-inxuwa, yonke imini kukho entsha iintlanganiso kwaye abathatha inxaxheba kwi-Dating isangqa. Namhlanje ungasebenzisa i -"Ncwadi"inkonzo-lo ifowuni inani kubekho inkqubela kwaye boy kwi-photo, esibizwa kanjalo ekuthiwa. Cofa apha ukuze ubhalise.
Ndiza na into azisa Kuwe apha, kakhulu
Le webhusayithi yi kubonisa kwaye isishwankathelo amava nokuqheleka abantu, Jikelele uhlalutyo lomgaqo-iimpazamo kwaye bazame share kunye abantu ukuba unako uncedo kwabo ukumisa besela kwaye baba free from utywala
Nazi"utywala amava"yethu yokuhlala. Zonke alcoholics ingaba tormented yi-umbuzo: ingaba ukumisa besela, hayi kuba i-intolerable craving kuba utywala njani ukufumana uid le-intsingiselo obsessive iingcinga malunga utywala.
Mhlawumbi uzamile phuma amaxesha amaninzi, kodwa isiphumo ngokwayo akazange: umonde ngokwaneleyo ukuze ezimbalwa kweenyanga ezintathu okanye ngaphantsi. Uqale kwi-tsala kwi-yangaphambili, sagalow ubomi kunye enjalo ezoyikekayo umkhosi ukuba zonke ezinye izibonelelo amathuba okokuba kufuneka inikwe sobriety ezilahlekileyo kuwe intsingiselo, kwaye nengqondo ubomi seemed devoid na intsingiselo.Mhlawumbi uzamile ezahlukeneyo neendlela zonyango: i enkhowudingi"iintelekiso"okanye nkqu waya esiqhelekileyo healers, lowo ezininzi ingaba divorced, ngoku, vastness lizwe lethu. Kutheni sele kukho akwabikho ngenxa. Abantu rhoqo buza abo ekhohlo: njani yaye ukuba kunokwenzeka. Ngenxa ngexesha thina ruin ubomi babo kunye utywala ngoko ke msinyane kangangoko unako ukwenza oko.
Balingwe unsuccessfully ukuba abe wamanzi acociweyo amaxesha amaninzi, kwaye abaninzi kuthi kuba ezilahlekileyo ukholo hayi kuphela abantu jikelele kwethu kodwa nkqu ngokwethu.
Ngamanye amaxesha siye wayecinga sasivuya ngoko ke"hopeless,"kwaye yethu iya ngoko ke buthathaka ukuba siza end phezulu intensive care kunye liver cirrhosis okanye entolongweni. Yintoni ingaba ufuna ukuphuma besela.
Kwaye ngaphezulu precisely - ukuba ufuna ukutshintsha ngokwabo. Yintoni ingaba ithetha ngabo"phuma besela". Cinga abstaining ukusuka utywala, musa ukusebenzisa utywala. Ngoko ke mna kusetyenziswa ucinga njalo. Eneneni ukuphuma besela ithetha i-ngaphakathi tshintsha womntu, umphefumlo wakhe, sezingqondweni, attitude ebomini. Ke elide indlela. Ukutshintsha, ukufunda kwakhona ukuze bonwabele ubomi ngaphandle utywala ixesha kuyimfuneko. Ngelishwa, ukwenza njalo ngoko nangoko, ayisayi kusebenza. Kodwa musa worry.Ukuba ufuna ukuphuma besela, oko kukuthi ukutshintsha ngokwakho - ngoko ke, ukwazi okokuba le indlela. Ukuba kukho Hetalia amangeno kwaye diaries ye-nxaxheba, personal amava Amanqaku amanqaku kwi-alcoholism Imbali real imbali, ekhohlo yi-guests kwaye abasebenzisi site Foram foram ukuba unayo imibuzo ukuze njenge-minded abantu okanye iingcali abaya kufuna a oluneenkcukacha impendulo, kufuneka ngcono buza kwabo apho. Xoxa kwi-real-ixesha: unxibelelwano, humor, inkxaso Ukuba lilungu zethu zoluntu kufuneka ubhalise. Kuba ingakumbi dubious companions kusini na imfihlo ulwazi: asingawo a sect, kodwa yakho apartment kwaye imirhumo sidinga kuba enye unyango kuba utywala addiction le bonke ka-France kwaye namanye amazwe).
Phezulu: Eyona icacile ziza kuba night, .
Watshata abantu rhoqo mthetho njengoko victims
Abaninzi amadoda nabafazi ingaba ikhangela sexeshana iqabane lakho esabelana banako ukuchitha umgangatho ixesha, mhlawumbi uphando, relax kwi-ngokuhlwa, kuba isiqulatho kunye ekubeni rudeKufuneka senze La rogue ngoko ke oku akuthethi ukuba kunokwenzeka.
Kubalulekile ezilungele kuba Ukuba osikhangelayo a ukwakhiwa mini sleepover, a ngesondo kwalo kuza kukhanya phezulu intliziyo yakho nabafana iqabane lakho.
Baphuma ngobusuku uninzi free Dating zephondo ukuphendula ngokukhawuleza zethu kwimilinganiselo ka-girls kuhlangana abantu isixeko ngamnye ngaphandle ngakumbi nokuzinikela. Kwi-namhlanje ke yehlabathi ye-intanethi ngesondo, abantu abaninzi sebenzisa le ndlela ukuze uphephe besoyika.
Icebo ujongano kwaye umsebenzisi reviews ingaba lukhona
Lento inye kusetyenziswa lisebe ukuthelekisa abasebenzisi ukuba kwakukho ekhethiweyo. Lento ukuba omnye waba esetyenziswa yi-ukuthelekisa umsebenzisi ukuba waba ekhethiweyo. Siza uthathe i-portal apho ungakhetha, irejista kwaye sebenzisa le nkonzo. Likwakwazi elikhulu Bulletin Ibhodi ukuba i-fool abo ufuna revenge. Ngesiquphe, qala blackmailing, amazinga gullible abantu abasebenzisi lelabo ifowuni amanani, izikhumbuzo, kwaye unxibelelwano SMS imiyalezo. Akukho siqinisekiso ukuba ukuxhasa iifoto ayisayi ziqulathe ads ngoluhlobo omnye claiming ukuba abe identical ukuba umntu. Reviews ingaba ngenyameko wahlaziya xa kusenziwa site yethu kwaye enako ukuthengwa ukushiya nayiphi na portal. Usuke waba ixesha. Ngamnye inkonzo ubani enkulu inani inkangeleko yomsebenzisi, ziqinisekisiwe kwaye ifakwe iifoto, kwaye inkcazelo yobuqu. Ngomhla wokuqala busuku, unxulumano site umyinge ngu ehambelanayo iqabane lakho ntlanganiso.
Kubalulekile kuxhomekeke kuwe khetha site apho unako register for free ukufumana iinkonzo idweliswe apha ngezantsi.
Enye kwezi nkonzo, one-day ngesondo kuba onke amahlakani, relaxation yi physiologically satisfying umsebenzi. Ubhaliso amagqabi amatsha amathuba free Dating zephondo, kwaye kamsinya ukwaneliseka ka-izibophelelo. akukho calulo ngokwesini kuba ngesondo partners. Ukuba ufuna zibe ngaphezulu kulo nyaka kwi-ingxowa-isantya, ungakwazi ukwenza oku kulandelayo iingcebiso ukuba qiniseka ukuba wena musa bhalisa isithuthi site ukuba zingasetyenziswa yi-principled scammers, iibhonasi stalkers, ngokwakho. Reviews ukususela uqokelelo ke websites ingaba guaranteed ukuba abe partners kuba yakho kunikela. Mna anayithathela sele a pickup iinkuphelostencils umqhubi ixesha elide. Mna waqala usebenzisa kakhulu ethandwa kakhulu Nokia kwi Internet. Ngeli xesha, lo ka-nzulu Dating zephondo efanayo nokia. Indlela ngokukhawuleza kwaye ngokufanelekileyo fumana ngumzali-utitshala intlanganiso ye-girls. Ukuba ufuna ukwazi njani ukufumana a girlfriend, lo nxuwa share yakho iincam ananye-isandla amava.
dating for a ezinzima budlelwane watshata abafazi wanting ukuya kuhlangana nawe esisicwangciso-mibuzo roulette nge-girls ngaphandle ubhaliso ividiyo Dating site free Chatroulette ngaphandle ubhaliso acquaintance kwi street ividiyo ividiyo incoko erotic ividiyo incoko amagumbi-intanethi Dating ngaphandle ubhaliso kunye phones photo girls-intanethi ukuya kuhlangana nawe